Inona no atao hoe pancreatitis - akere, chronic, parenchymal, reactive, pseudotumorous, biliary, manisa?
Inona no atao hoe pancreatitis, ahoana no maneho ny areti-maso sy ny fomba fitondrana azy?
Inona no atao hoe pancreatitis ary inona no loza aterak'io aretina io? Isan-taona, hatramin'ny 800 tranga isaky ny olona 1000000 no voasoratra anarana eran'izao tontolo izao. Ny tsy fahampian-tsakafo, ny fidorohana zava-mahadomelina, ny haavon'ny fahasarotana - izany rehetra izany dia manimba ny fiantraikan'ny pancreas.
Inona no atao hoe pancreatitis ary mampidi-doza ve izany?
Ny pancreatitis dia vondron'olona aretina miaraka amin'ny soritr'aretina sy ny aretim-pitondran-tena. Anarana iombonana amin'ny teny grika taloha Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny grika --itis - ny areti-maso ny pancreas. Misy karazany maro ny aretina, ary ny tsirairay dia mitondra loza mitatao ho an'ny ain'olombelona. Mba hahatakarana ny atao hoe pancreatitis dia, ary raha zava-doza izany, dia zava-dehibe ny mandinika ny zavatra entina miasa ny entona pancreas.
Ny asan'ny vatana:
Exocrine na sekretera sekretary ivelany. Ny famokarana enzymes digestive: trypsin, chemotripsin, amylase and pancreatic lipase. Ny enti-manilikilika dia tsy maintsy manala jiosy marefo amin'ny atiny ary mila ampiasaina amin'ny fihanaky ny sakafo, proteinina, ny matavy ary ny voamadinika miaraka amin'ny sakafo.
Fihetseham-pon'ny olona. Fitsipika momba ny habetsaky ny jiosy pancreatic ao amin'ny habetsaky ny fanamafisana ny zavatra rehetra.
Endocrine function. Ny nosy Langerhans, izay misy tsindrona maro manelanelana ny pancreas lobules, dia mamokatra hormones mpanohitra: glucagon sy insuline, mandrindra ny kobam-bary. Ny glucagon dia miteraka fitomboan'ny glucose amin'ny ra, insuline - fihenam-bidy.
Pankreatis mahery - inona io?
Taorian'ny fety be dia be nandritra ny fialantsasatra sy ny fanararaotana ny alikaola, sakafo matavy, olona maro no hianatra izay pancreatitis mahery dia tsy mihaino. Ny aretina dia eo amin'ny toerana fahatelo eo anelanelan'ny aretina hafa ao amin'ny foitra an-kibo, manome ny palmie amin'ny cholecystitis sy appendicitis. Ny lehilahy dia mora ampoizina matetika noho ny vehivavy. Noho ny fihanaky ny pancreatitis dia misy karazam-pahafatesana ambony - hatramin'ny 15% amin'ny tranga rehetra.
Etiology momba ny pancreatitis mahery:
sakafo mampidi-doza (salady, matavy, mamy, mamy);
aretina ara-panafody sasany (fibrofisin'ny cystika);
Ny fampiasana fanafody maharitra amin'ny fotoana maharitra dia misy fiantraikany eo amin'ny pancreas (hormones, diuretics thiazide);
ny fizotran'ny areti-mifindra;
virosy sy bakteria (parotitis, mycoplasma ).
Nandritra ny fampandrosoana ny fizotry ny asa dia niharan'ny fanitsakitsahana ny asany fototra: ny enzyme sy hormones, izay novolavolaina tamin'ny endrika tsy mavitrika (fampidiran-dàlana natao tao amin'ny taratasy mivalona mahazatra), tampoka dia manomboka mivadika mivantana ao amin'ny pancreatic, ka mahatonga ny fitsaboana ny vatana. Mivelatra ny fery sy ny areti-maso.
Inona ny pancreatitis mitaiza?
Ny pancreatitis mitaiza dia fihinan'ny tsiranoka. Ny dingana manaraka dia ny tsy fahampian'ny tsiambaratelo ny enzymes, ny fanovana tsy azo ovàna ao amin'ny parenchyma amin'ny taova, ny fihenan-tsakafo sy ny fihanaky ny fibra fibra. Ny fihanaky ny pancreatitis mitaiza dia mihatra amin'ny lozam-pifamoivoizana, miaraka amin'ny fihenjanana mahatsiravina.
Antony mahatonga ny aretina:
Hepatita B sy C, tazo mahery , parotitis;
toaka amin'ny zavatra mampidi-doza, sakafo mahantra;
Parenchymal pankreatitis - inona ity?
Ao amin'ny lobolan'ny parenchyma (pancreatic tissue) dia mitranga ny fisian'ny hormones sy enzymes, ka raha misy fanontaniana mipetraka: inona ny parenchymal pankreatitis - azo valiana fa ity no aretina fihinan'ny pancreatique mahazatra indrindra. Ny fizotran'ny pancreatitis parenchymatous:
ny fanitsakitsahana ny tsy fahampian-tsoan'ny lakandrano, noho ny ody lamaody;
ny fihenan'ny insuline;
fiovana am-bony eo amin'ny rafi-pandaminana;
raha ny fiantraikany amin'ny parenchyma dia 80% - ny fivoaran'ny diabeta mellitus .
Ny pancreatitis reactive - inona izany?
Sambany vao niatrika ilay aretina, misy olona manana fanontaniana maro: inona no atao hoe pancreatitis malemy, ny aretina dia mampidi-doza ho an'ny fiainana sy ny fomba hanasitranana izany? Ny pancreatitis malemy dia toe-pahasalamana. Anatin'ireo manam-pahaizana no heverina ho endrika mora indrindra, azo ovaina amin'ny fanitsiana. Matetika no mihatra amin'ny aretina amin'ny vavony sy ny atiny ary ny tsiranoka ny tsinay. Ny antony iray manan-danja mahakasika ny fisehon'ny pancreatitis dia mivezivezy sy mihinana sakafo matavy.
Psevdotumorozny pancreatitis - inona ity?
Ity karazam-pahaizana organa ity dia matetika antsoina hoe pseudo-tumor process, satria ny dingana atonta ao amin'ny ety dia mitovy amin'ny onkologie. Ny pancreatitis Psevdotumorozny ao amin'ny pancreas araka ny antontan'isa dia hita amin'ny tranga folo rehetra, amin'ireo olona voan'ny pancreatitis, matetika amin'ny lehilahy. Ny antony lehibe amin'ny aretina dia ny alikaola.
Inona no atao hoe pancreatitis biliary?
Ny pancreas - ny fiterahana azy amin'ny pancreatitis biliary, dia mifandray akaiky amin'ny aretin'ny aty sy ny gallbladder. Ny fandinihana ny marary toy izany dia naneho fa amin'ny 60% amin'ny trangan'ny cholelithiasis, ny aretina mitambatra dia pancreatitis mitarika biliary. Antony mahatonga ny aretina:
Ny aretina azo avy amin'ny vavan'ny biliary amin'ny alàlan'ny lymphatiques dia miparitaka any amin'ny fiharian-karena;
Ny famindrana ny kilaoty ao amin'ny lakandrano fanafody dia miteraka fahasimbana amin'ny tavy sy ny lakandrano.
Ity no sinton'ny pancreatitis biliary:
fanaintainana mafy toy ny colic;
Fanambarana vokatry ny aretina:
tsy fahampian'ny aretina;
Pancreatitis - inona no atao?
Ny karazana pancreatitis dia karazana aretina iray hafa izay manintona ny pancreas. Ny pancreatitis dia mipoitra indrindra eo amin'ny 50 taona eo an-dalan'ny fiovan'ny siran-drongony, ny sira calcium dia manomboka mioty ao anatin'izany, ary mamorona kely kely porous calculi. Ny soritr'aretina:
fanaintainana amin'ny hippocha na hidy;
mampitombo ny asidrain'ny vavony;
Ny necrosis amin'ny pancreas - inona io?
Ny fihanaky ny pancreatitis dia mety hitarika amin'ny dingana lehibe amin'ny aretin'ny pancreatic necrosis, izay mahatonga ny trondro ho toy ny fahafatesana vokatry ny tazo manaraka. Ao anatin'ireo 70% amin'ny tranga dia hita fa mararin'ny marary izay nanararaotra ny alikaola, ny antony hafa dia miteraka fihenam-bolo mahery sy mahatsiravina. Ny soritr'aretin'ny necrosis pancreatic:
ny fanaintainana mafy sy tsy misy fandeferana;
mamoaka loharano iray izay tsy mitondra fanampiana;
kisarisaroka amin'ny lafiny (Gray-Turner symptom);
fanaintainana mandritra ny fitsaboana.
Entin'ny fonosana - soritr'aretina
Ny mari-pahaizana sy ny soritr'aretin'ny pancreatic ao amin'ny dingana saro-pady dia miankina amin'ny haben'ny henjana:
Light form. Tsy fahita firy ny faharesen'ny fangalarana pancreas sy ny tractème digestive. Nandritra ny diany, dia nodinihina ny ody lasy. Ireo soritr'aretina tsy dia misy dikany (manasitrana, fireharehana). Aretina mampalahelo miovaova: ao amin'ny epigastrium, ao amin'ny hypochondrium havia. Ny endriky ny fanaintainana dia mihitsoka, miaraka amin'ny fitifirana any aoriana. Jaundice sklera.
Heavy endrika. Famantarana ny pancreatitis: fanaintainana mafy, ratsy kokoa amin'ny toeran'ny marary any aoriana. Mipoitra, ranom-biriky. Temperatila avo.
Fihetseham-po amin'ny endrika faran'izay mafy amin'ny pancreatitis mahery, mitombo ny fahafatesana:
pekansa necrosis izay misy aretina mitroka ny sela;
pescreatic abscess (pus manangona ao amin'ny pancreas sy ny taita manodidina).
Ny trangam-pahontronika mitranga ao anaty pancreas, raha oharina amin'ny dingana mahery vaika dia matetika no mihelina sy tsy misy asymptôma mandra-pahatongan'ny fotoana iray, raha miovaova ny fiovana anatiny, dia mety hampiakatra ny fisian'ny diabeta. Mitebiteby be ny aretin'ny pancreatitis mandritra ny fiankinan-doha, izay zava-dehibe ny mitandrina:
ny fanaintainan'ny fehin-kiran'ny paroxysmal ny varotra miovaova avy amin'ny fahalemena ho matanjaka;
Reflux esophagitis - noho ny fihenan'ny tsiranoka ambany amin'ny tsindrin-tsakafo, dia miverina amin'ny voan-tsakafo ny voka-dratsiny, izay misy fiara mifoka sodina;
dipoavatra matetika miaraka amin'ny fofona mamy;
Ny angiomasin'ny hoditra.
Entin'ny fonosana - fitsaboana
Taorian'ny fikarakarana tsara sy ny fanamafisana ny aretina, ny lahasa voalohany amin'ny dokotera dia ny manambara ilay marary: inona no atao hoe pancreatitis, inona no mety hitera-pahavoazana amin'ny aretina. Ny fitsaboana dia voafidy arakaraky ny toetran'ny olona sy ny taonan'ny marary. Ny fomba fitsaboana ny pancreatitis, dia miankina amin'ny antony maromaro:
akora na aretina;
ny fisian'ny aretina mitambatra;
Ahoana no hanamaivanana ny areti-mifindra?
Iza, fara fahakeliny, indray niainan'ny aretina vokatry ny areti-maso, dia fantaro ny atao hoe pancreatitis. Ny fanafihan'ny pancreatitis dia marary mafy sy maharary marary. Tsy voatery ny hanaisotra ny areti-mifindra irery, fa misy ihany koa ny fitsaboana tsy misy fitsaboana, ary zava-dehibe ny manao zavatra hanamaivanana ny toe-javatra. Fanampiana voalohany ho an'ny pancreatitis:
fitsangatsanganana ary tsy misy fihetsika tampoka, maka ny embryon fihazàna;
gisa amin'ny hypochondrium;
ny famoahana rano amin'ny ampahany kely isaky ny antsasak'adiny (rehefa misotro ny ranom-boany, 2-3 ny ampahany amin'ny sotro iray no mamo);
Manaova tabilao ho an'ny hydrochloride Drotaverine, ho toy ny safidy hanaovana tsindrona ny No-shpy 0,8 mg.
Fitsaboana ny pancreatitis mitaiza
Ny fitsaboana ny aretin-kozatra ao an-tokantrano dia mety hiteraka vokatra tsy azo ovaina. Nandritra ny fihanaky ny aretina fihanaky ny pancreatitis dia natao tany amin'ny hopitaly. Ny iray amin'ireo fepetra manan-danja amin'ny fanatsarana ny toe-pahasalaman'ny zaza dia fihinam-bena tsara amin'ny pancreatitis. Ny fitsaboana ny fizotran'ny aretina dia ahitana voka-dratsin'ny zava-mahadomelina:
antibiôtika (Ampicillin, Gentamicine) misy fifindran'ny aretina;
antihistamine (Dimedrol, Suprastin) - vokatra mahasosotra sy hipnotika;
antispasmodics (No-sppa, Papaverina hydrochloride) - misoroka ary mampihena ny tsindry ao amin'ny andrin-dronono;
antiperment fiomanana (Gordoks, Katrikal) - manaisotra ny asan'ny enzymes of trypsin, chemotripsin ary amylase;
analizena (Analgin, Baralgin );
cytostatics (cyclophosphamide) miaraka amin'ny pancreitis pseudotumorous.
Inona no azonao ihinanana amin'ny pancreatitis?
Ny fihinanana sakafo amin'ny pancreatitis pancreatitis dia ny fanalahidin'ny fitsaboana mahomby ary ny fihenan'ny trangam-pandrefesana ao anatin'ny tapa-bolana. Ny sakafo ho an'ny pancreatitis dia mifototra amin'ny sakafo mahasoa sy mahasalama, hazavana ary eny an-tany. Sakafo sy sakafo ho an'ny pancreatitis:
casseroles tsy misy menaka;
kofehy vita amin'ny mofomamy sy trondro;
mofomamy mihinana amin'ny rano;
mofo (vary, oats, buckwheat);
compotes voankazo maina;
Handorana ny tanana
Fahavimban'ny loko - fitsaboana
Fanentanana ny lohalika - fitsaboana any an-trano
Ny Syndrome Isenko-Cushing - ny fomba mahomby indrindra hiadiana amin'ny aretina
Stugeron - famantarana ny fampiasana
Gastroenteritis - soritr'aretina
Mandroaka ny rano avy eo amin'ny valindrihana
Jennifer Aniston sy Justin Teru
Lake of Namibia
Toby eo amin'ny lakozia - ahoana no fomba handrafetana ny atin'ny trano?
Nanome fanadihadiana nahaliana momba ny gazetiboky ELLE i Charlize Theron
Ny fanirian'ny lehilahy
Heidi Klum sy Thomas Kaulitz dia hita teny an-dàlana handeha an-tongotra teny am-pandehanana
Tattoo kely eo amin'ny tongotra